INSTAGRAM ၏စိန်ခေါ်မှုကိုဘီလ်ကလင်တန်ကမှတ်တမ်းတင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း - သတင်း
နှောင်းပိုင်းတွင်အဖြစ် Instagram ကိုစိန်ခေါ်မှုများတစ်တွေအများကြီးအကြာကြီးရှိခဲ့သည်။ အချို့ အခြားသူများထက်ပိုပြီးခံနိုင်ရည် ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်နေဆဲပင်အရှိဆုံးcurုံမှူးမတ် Instas အပေါ်စိန်ခေါ်မှုများပြန်ပေါ်လာထံမှ reeling နေစဉ်, ဤအမှုအရာမှခြေဆွံ့၏ဒီဂရီရှိပါတယ်ပို။ ပို။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ 5k ကိုပြေးတာကခြေဆွံ့သူမဟုတ်ဘူး။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုခိုင်လုံစေရန်အလျင်အမြန်ပြုမိပါကပိုင့်ကိုလည်ပင်းအနည်းငယ်ကခြေဆွံ့နိုင်သော်လည်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ရက် ၃၀ သီချင်းစိန်ခေါ်မှုသည်ခွင့်မလွှတ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သည် သင့်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်ကိုရွေးပါ။ ရုံကောက်ကြဘူး။
သို့သော်သာမာန်အားဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောတိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် - ဘီလ်ကလင်တန်သည်အယ်လ်ဘမ် ၄ ခုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ ဒါဟာမည်သူမဆိုရဲ့လမ်းအတွက်လာမယ့်တစ် ဦး Vibe နည်းနည်းဒါဟာ unassuming င် - ကဆက်ဆက်သုံးဆယ်တပြင်လုံးကိုရက်ပေါင်း (ဟုတ်ကဲ့ငါနေဆဲဒေါသထွက်) နေ့တိုင်းထပ်ခါတလဲလဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါက Bill Clinton က Instagram ကိုလူတိုင်းရဲ့တင်ပို့ချက်ကိုဘယ်လိုစိန်ခေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိလိမ့်မယ်။ Photoshop မှာသုံးနာရီလောက်ကြာမလား? ငါဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းဒီဂရီလိုအပ်ပါသလား? မစိုးရိမ်နှင့်။ ငါတို့မှာအဖြေတွေအားလုံးရှိတယ်။
ဘီလ်ကလင်တန်၏ Instagram စိန်ခေါ်မှုမှာအဘယ်နည်း။
သင်ထိုသို့လုပ်ရန်မှာသင်၏ထိပ်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးသီချင်းအယ်လ်ဘမ်လေးခုကိုရွေးချယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ထိပ်တန်းအယ်လ်ဘမ်လေးခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်အလွန်စိတ်သောကရောက်သောကြောင့်စိန်ခေါ်မှုစကားလုံးသည်သင့်လျော်သည်ဟုခံစားရဆဲဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသောအယ်လ်ဘမ်လေးခုကိုသက်သောင့်သက်သာရှိသောဘီလ်ကလင်တန်ကပြသလိမ့်မည်။ အခြားအရာများမဟုတ်ပါ။ သင်အမည်စာရင်းတင်သွင်းလိုက်တဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေကိုသင် tag လုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျိန်စာကိုသင်ပိုပေးချင်တယ်။
ဘီလ်ကလင်တန်က Instagram ပုံပြင်ကိုဘယ်လိုပုံသွင်းမလဲ
Gen X, Z (သို့) အနှစ်တစ်ထောင် (ကျွန်ုပ်သည်ဂရုစိုက်မှုကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီဖြစ်သောမည်သည့်အရာများဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မသိပါ) သည် Instagram ပုံပြင်တွင်ငါးမိနစ်ခန့်ကုန်ဆုံးမည်ဟုယုံကြည်ရန်ခဲယဉ်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ Photoshop တွင်သုံးနာရီကြာသင့်ကိုယူပါ။ အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုစာသားအစဉ်အဆက်အနည်းဆုံးစိန်ခေါ်မှုအရာဖြစ်၏။ သင်၏အယ်လ်ဘမ်များကိုရွေးချယ်ပါ၊ ပြီးနောက် ဦး တည်ပါ billclintonswag.com နှင့်ရိုင်းသွားပါ။
ပြီးရင် Screenshot လုပ်ရင်ကောင်းတာပေါ့။ သင်၏နောက်လိုက်များသည်အံ့အားသင့်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုကြည့်ပြီးသူတို့အတွက်နာရီများစွာအံ့သြကြလိမ့်မည်။ Spotify သည်သင့်ကို ဆက်သွယ်၍ သူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ Tame Impala ကမင်းကိုရိုက်နှက်ပြီးနောက်အယ်လ်ဘမ်မှာတင်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ မင်းအမေငိုလိမ့်မယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုပါပဲ။ ရပါတယ်။
• Vote - ဒီ Instagram စိန်ခေါ်မှုများအားလုံးမကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်ဟာအဆိုးဆုံးလဲ။
• ဤသည်လူတိုင်းအကြောင်းပြောနေတာရဲ့ခေတ်ဆန်းပန်းချီ filter ကိုရဖို့ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပါတယ်
• ထို့ကြောင့်လူများသည် Richard Branson အား 5k Challenge အားခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်